UFederighi uqinisekisa ukuba iiFusion Drives ziya kuhambelana nenkqubo ye-APFS | Ndisuka mac
Kwiminyaka emihlanu eyadlulayo, uApple wakhupha iFusion Drayivu kwimikhono yayo, kwiMac nakwiMac Mini, eyayingeyonto eyenye ngaphandle kokubeka i-SSD kunye ne-hard drive yoomatshini ukuze basebenze kunye kodwa kwinkqubo yethu ihlala ibonakala njengeyunithi enye. Yinkqubo elawula ukwazi ukuba yeyiphi i-hard drive oza kuyisebenzisa ngalo lonke ixesha, nangona bekulindelekile, i-SSD isetyenziselwa inkqubo yokusebenza kunye nokusetyenziswa kunye nediski enzima yokugcina igcinelwe imisebenzi yokugcina. Le nkqubo ishiywe ngaphandle kwinkqubo entsha yefayile ye-APFS ekuqaleni, kodwa iyakwenza njalo okwexeshana okoko ngokutsho kukaCraig Federighi sele besebenza ukubonelela ngenkxaso kolu hlobo lweyunithi.
Abafana abavela eCupertino babhengeze lo mda kwiphepha labo lenkxaso, batyikitya ukuba iiyunithi zeFusion Dr azizukuguqulwa zisebenze kwifayile entsha ubuncinci kwiinguqulelo zokuqala zeMacOS High Sierra, kodwa bekungekho izolo xa injineli eyi-Apple, uCraig UFederighi uthethile ngayo, yeyiphi nika ukuthembeka ngakumbi kolu khetho ukuba siyifumana kwiphepha lenkxaso.
UFederighi uqinisekisile olu hlaziyo lwexesha elizayo kwi-imeyile ethunyelwe kwiMacRumors reader apho sinokufunda khona "Ewe, siceba ukongeza inkxaso kuhlaziyo lwexesha elizayo." I-beta yokuqala ye-MacOS ePhakamileyo yeSierra isungulwe ngoJuni, i-beta ebandakanya inkxaso yeFusion Drayivu eguqula inkqubo yefayile ye-iMac kunye neMac Mini kwi-APFS, kodwa kwezi betas zilandelayo yayisuswe ngokupheleleyo, kubandakanya nenguqulelo esele ikho iMacOS High Sierra inokukhutshelwa kwiVenkile yeApple yeMac, mhlawumbi ngenxa yemicimbi yozinzo kunye neebugs ebezichaziwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UFederighi uqinisekisa ukuba iiFusion Drives ziya kuhambelana nenkqubo ye-APFS